(တယ်လျူရီယမ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
Most stable isotopes of တယ်လူရီယမ်
တယ်လူရီယမ်(Tellurium)ကို သံမဏိ ပြုလုပ်ရာတွင် ရောစပ်အသုံးပြု ကြသည်။ ထို့အပြင် အလူမီနီယမ်၊ ကော့ပါး၊ ခဲ၊ သံဖြူ တို့နှင့်ရောစပ်ကာ သတ္ထုစပ် အနေဖြင့်အသုံးပြု နိုင်သည်။ တယ်လူရီယမ် ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထားရှိနိုင်ရန်အတွက် ခဲ နှင် ရောစပ်ပြီး အသုံးပြု ကြသည်။ ထို့အပြင် ၎င်း ဒြပ်စင် ကို သံထည်လုပ်ငန်း ၊ ကြွေထည်မြေထည်လုပ်ငန်း ၊ ဖန်ထည်လုပ်ငန်း ၊ နံရံကပ် ကြွေပြား လုပ်ငန်း များနှင့် ဖောက်ထွင်းမှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြု နိုင်သည်။ တယ်လူရီယမ် ကို ရော်ဘာနှင့်ရောစပ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွနသောရော်ဘာများကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ စွမ်းအင် စက်ဆီ အဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
တယ်လူရီယမ်(Tellurium)ဒြပ်စင်သည် ကျောက်မီးသွေးများထဲတွင်2ppm ပမာဏ အထိပါဝင်သည်။ ကျောက်မီးသွေးများသည် ယင်းဒြပ်စင်၏ မူလအရင်းမြစ် လည်း ဖြစ်သည်။တယ်လူရီယမ် ကို သစ်ပင်များကလည်း စုပ်ယူနိုင်ကြသည်။ တယ်လူရီယမ်သည် သစ်ပင်များထဲတွင်6ppm အထိ ပါဝင်သည်။ စားသောက်ပင် များတွင် အနည်းဆုံး5ppm ထက်ပို၍ ပါရှိသည်။ အခြားဒြပ်စင်များနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းမရှိသော တယ်လူရီယမ် သီးသန့်များကိုမူ သဘာဝတွင် ရှားပါစွာတွေ့ရှိရသည်။ တယ်လူရီယမ်ပါဝင်သော သတ္တုရိုင်းများမှာ Calaverite ၊ Sylvanite နှင့် Tellurite တို့ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် ယင်းတို့သည် တယ်လူရီယမ်(Tellurium)၏ မူလအရင်းမြစ် တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တယ်လူရီယမ် ထုပ်လုပ်မှု သည် တစ်နှစ်လျှင် ၂၂၀ တန်ခန့်ရှိပါသည်။ အဓိက ရှာဖွေထုပ်လုပ်သော နိုင်ငံများမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၊ ကနေဒါနိုင်ငံ ၊ ပီရူးနိုင်ငံ နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့ဖြစ်ပါသည်။
တယ်လူရီယမ် ဒြပ်ပေါင်း၏ သက်ရှိများကို တိုက်ရိုက်ဘေး ဒုက္ခပေးမှု မှာ နည်းပါလှပါသည်။ တယ်လူရီယမ် သည် အနံ့ဆိုးရွားခြင်းကြောင့် တက်ကျွမ်းသော ဓါတုဗေဒ ပညာရှင်များသာ ကိုင်တွယ်အသုံးပြု ကြသည်။ ရှုရှိုက်မိသောအခါတွင် လည်း ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း သို့လွယ်ကူစွာ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ တယ်လူရီယမ်၏ အငွေ့ပျံမှုသည် 20°C တွင်သာ ရှိသည်။ လေထုအတွင်း အမှုန်များပြန့်နှံ့ နိုင်သောကြောင့်ဘေးဒုက္ခများ ဖြစ်စေသည်။ ပြန့်နှံ့မှုသည် အလွန် လျှင်မြန်သည်။ အမှုန် များ ပြန့်နှံ့ခြင်းကြောင့် ရှုရှိုက်မိလျင် အစာအိမ်လမ်းကြောင်း များတွင် အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် အာရုံကြော နှင့်ဆိုင်သော ရောဂါ များနှင့် အသည်း ကင်ဆာများဖြစ်စေနိုင်သည်။
↑ Cverna, Fran (2002). "Ch.2Thermal Expansion", ASM Ready Reference: Thermal properties of metals. ASM International. ISBN 978-0-87170-768-0။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တယ်လူရီယမ်&oldid=504911" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၀၄:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။